माधव नेपालको यस्तो अफरले घनश्याम भुसालको मन पग्लियो, कहिले फर्किदैंछन् एस पार्टीमा ? – GALAXY
माधव नेपालको यस्तो अफरले घनश्याम भुसालको मन पग्लियो, कहिले फर्किदैंछन् एस पार्टीमा ?
माधव नेपालको साथ छाडेका तेस्रो धार भनिएका नेकपा एमालेका नेता मध्ये एक नेता घनश्याम भुसाललाई एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीमा आउन नयाँ अफर गरेका छन् । नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको (एकीकृत समाजवादी)को अफरले घनश्याम भुसालको मन पग्लिने संभावना देखिएको हो ।
०७५ जेठ २ गतेको सांगठनिक संरचनामा फर्काउने भनेको निर्णयलाई एमाले नेतृत्वले लत्याएपछि भुसाल चिढिंदै आएका थिए । उनले एमालेमा बस्न सक्ने बातावरण सकिएको भन्दै माधब नेपालकै पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०मा जाने तयारी गरेका निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
उनि सहित अन्य मध्यधार नेताहरु एमालेमा बस्न नसक्ने वताइरहेका छन् । धेरै नेताहरु अहिले पनि अलमलमा नै छन् । एमाले फागुन २८ बाट एक कदमपछि नफर्केपछि यी नेताहरुमा वेचैन शुरु भएको हो । तर नेपाल पक्षमा लागेर पनि अन्तिममा एमालेमा फर्केका भुसाल भने नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०मा फर्कने भएका छन् ।
ओलीको बोली व्यवहार राम्रोसंग थाहा पाएका भुसाल एमाले नाम र सूर्य चिन्हका कारण एमालेतिर लागेका थिए । तर ओलीले एक दिन कार्यक्रम संचालन गर्न दिएको योगेश भट्टराईलाई त्यसपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएनन् ।
ओलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावलाई नभएर लेखराज भट्टलाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए । बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापालाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिए । जब कि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य इन्चार्ज हुनुपथ्र्यो । आँफूहरुले २ जेठमा फर्काउने र १० बुँदे इमानदारी साथ पालन गराउन सक्ने भन्दै एमालेमा फर्केका नेपाल पक्षका नेताहरु अहिले भने पछुताएको सम्बन्ध स्रोतले बतायो ।
भुसाल भने सांसद पदको माया मारेर नै नेकपा एसमा फर्केने भएका नेकपा एसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने ‘उहाँलाई पहिला नै एमालेमा जानुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन । तर जानु भयो । ओलीले के के न गर्ला भन्ने थियो तर ओली हिजो जे थिए अहिलेपनि त्यहि छन् । त्यहि भएर उहाँ छिटै हाम्रो पार्टीमा आएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुन्छ ।’ भुसाल नेकपा एसमा फर्केपछि उनीसंग भएका धेरै नेताहरु एसमा फर्कने स्रोतको दाबी छ ।
विभाजित एमालेबाट प्रदेश सभा सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० रोज्ने समय २२ भदौसम्म थियो । जुन समय मंगलबार साँझ ५ बजे सकिएको छ । ४ जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको बारेमा केहि दिनमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने बताईएको छ ।
त्यसपछि १० बुँदे एमालेमा एतान उताको भएको थियो । अन्तत एमाले विभाजन हुने भएपछि फेरी १० बुँदेको फण्डा झिके । १० बुँदे कार्यन्वयन गर्ने भन्दै नेपाल पक्षका दोस्रो धारका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्दै बैठक बोलाए । नेपाल पक्षका दोस्रो धारका १० जना नेताहरु पनि ओलीको पक्षमा लागे । तर अन्तःएमालेमा ओलीले २ जेठमा पनि फर्काएनन् । नत १० बुँदे इमान्दारी साथ लागु गरेका छन् ।